တူညီသော အတွေးများစွာ အတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တူညီသော အတွေးများစွာ အတွက်
တူညီသော အတွေးများစွာ အတွက်
Posted by ေမာင္ဆန္း on May 10, 2011 in Creative Writing, My Dear Diary | 22 comments
ကျွန်တော် ရွာထဲရောက်ကာစ က ပို့စ်တင်ဘို့နေနေသာသာ မန်းတာတောင် word ထဲမှာ စမ်းရိုက် ပြန်ကူး တင် လုပ်ရတယ် ဒါတောင် တချို့ စကားလုံးက ရိုက်လို့မရတော့ ပို့စ်ထဲက တူတဲ့စကားလုံးပြန်ကူး paste လုပ်ရတယ် paste လုပ်ပြီးရင်လဲ လေးထောင့်ကွက်တွေပဲ မြင်ရတယ် published လုပ်ပြီးမှ စာမြင်ရတယ် မှားမှန်းသိတဲ့ အချိန်ပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူး ( စက် က window 7, 64 bit ကြောင့်မရတာလို့ ပြောတယ် ၊ 32 bit ပြောင်းလိုက်တော့ အဆင်ပြေတယ်) သိသူတွေ အတွက် လွယ်တဲ့ကိစ္စက မသိသေးတဲ့သူအတွက် တော်တော်ခက်ပါတယ် အခုတော့လဲ အဲဒီကိစ္စက အဆင်ပြေသွားပါပြီး ဒါပေမဲ့ တစ်ခါ တစ်လေ ရီနေတဲ့ပုံလေးကို ( ) မန်းတဲ့ ထဲရိုက်ချင်တယ် ဘယ်လိုရိုက်ရမှန်းမသိဘူး (အခုလဲ မသိသေးပါဘူး သိတဲ့သူတွေ ကျေးဇူးပြုဖြေပေးပါဦး) Copy ,Paste လုပ်တာမဟုတ်ဘဲ အလွယ်တကူ စာရိုက်ရင်းနဲ့ ထည့်ရိုက်ချင်တယ် ။
ဟိုတစ်ပတ်က king ရဲ့ ပို့စ် တစ်ခု မှာ ဝင်မန်းဖြစ်ပါတယ် ၊ king ဆိုတော့ ဖဲရိုက်ဖူးတယ် ဆိုတဲ့ ရွာသူချောလေး တစ်ယောက်ကို သတိယပြီး နောက်ပြောင်ရင်း မန်းလိုက်ပါတယ် သူကလည်း ပြန်မန်းပါတယ် သူစာနောက်ဆုံးမှာ အဲဒါမျိုးလေးပါလာလို့ ဘယ်လိုရိုက်ရလဲ သိချင်တာနဲ့ (အခုဟာက copy,paste လုပ်ထားတာပါ) မေးဖြစ်ပါတယ် သူကလည်းပြန်ဖြေပေးပါတယ်
ကျွန်တော်းစကားမစပ် နောက် က ရီတဲ့ မဲ့တဲ့ ပုံပေါ်အောင် ဘယ်လိုရိုက်ရလဲ
သူးနောက်က ရီတဲ့ မဲ့တဲ့ပုံဟုတ်လား ဘာကိုပြောတာလဲ နားမလည်ဘူး ။
သူးအတော် စဉ်းစားလိုက်ရတယ်.. ဝှိုက်ရေ.. ယူပြောတာ ဂျိုကာမို့လား …
သူးဘယ်လိုပေါ်အောင်ရိုက်လဲဆိုတာ တနည်းပဲ ရှိတယ်..မဝေခင်ကတည်းက တချပ်ခိုးထားလိုက်… သေချာအောင် နှစ်ချပ်သာ ခိုးထားလိုက် …
ကျွန်တော်းအဝါလေး ထဲက အနီလေးသွားဖြဲ နေတဲ့ပုံလေ တချို့လဲ း) အဲဒါမျိုးရိုက်သလားလို့
ကျွန်တော်ကလည်း ကျွန်တော့်အတွေးနဲ့ မေးတယ် သူကလည်း သူ့အတွေးနဲ့ပြန်ဖြေတယ် နှစ်ယောက်စလုံးကမှန်တာပဲ ဒါပေမဲ့ လိုချင်တဲ့အဖြေတော့ မရလိုက်ဘူး ။ ဖတ်ဖူးတဲ့ ဟာသလေးတစ်ခုကို သတိရမိပါတယ်
အဘိုးအိုတစ်ဦး နေမကောင်းလို့ ဆေးခန်းတစ်ခုရောက်လာပါတယ် သူနာပြုဆရာမလေးက
“ အဘိုး ဆေးခန်းလာတာ အဖော်ပါမလားဘူးလား”
“ မပါ ပါဘူးသမီးရယ် ဆေးခန်းလာတာ အဖော်လိုသေးလို့လား”
“ အဲဒါဆိုလဲ သမီးမှာ ရှိရင် အဘိုးကို နှစ်ခုလောက်ပေးပါ”
အဲဒီဟာသလေးကို ကြားဖူးကာစကစထက် ကိုယ့်အဖြစ်နဲ့ယှဉ်ပြီးတော့ မှ ပိုရယ်မိ၊ပိုသဘောကျမိတယ် ဒါကတော့ ဟာသမို့ ထားတော့ အပြင်မှာ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး အတွေးချင်းမတူ နားလည်မှုချင်းလွဲမိတာတွေ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ နှစ်ကြိမ်လုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စ အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးဆို ပြသနာက အကြီးကြီးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ဥပမာ ခွဲစိတ်ခန်းမှာ မှားခွဲလိုက်တာ လေယာဉ်မောင်းနေရင်း အချိန်စောပြီး နားလည်မှုလွဲ ဘီးတင်လိုက်တာ ဘင်လာဒင်ကို ဝင်စီးတဲ့အဖွဲ့လို ကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့မျိုးမှာ အချိန်ကိုက်မလုပ်နိုင်ဘဲ နားလည်မှုလွဲသွားတာ ရေးရင်တော့ အများကြီးရှိမှာပါ နောက်ဆုံး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေကြတဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ ဘက်နှစ်ဘက် စလုံးက လူတွေရဲ့ အတွေးတွေမတူ နားလည်မှုတွေ လွဲနေလို့သာ ထွက်လာတဲ့အဖြေက ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လို့ လိုချင်တဲ့အဖြေမရတာ လို့မြင်မိပါတယ် အားလုံး အတွေးတူလို့ နားလည်မှုတွေ ရကျစေချင်ပါတယ်
နိုနိုရေ … ရီနေတဲ့ ပုံပေါ်အောင် အင်္ဂလိပ်ဖောင့်ပြောင်းပြီး ( : )အစက် နှစ်စက်ကို ရိုက်ပြီးရင် ) ကွင်းပိတ်လေးကို ရိုက်လိုက်ရင် ရပါတယ် … မဲ့တဲ့ပုံဆိုရင်တော့ အစက်နှစ်စက်ကို ရိုက်ပြီးရင် ကွင်းစလေးကို ရိုက်လိုက်ပါ။ နောက်တစ်မျိုးက အစက်နှစ်ရယ် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ D ကို ရိုက်လို့ရပါတယ် …. ;)
ရပြီ ရပြီ ရိုက်တော့ မပေါ်ဘူး smbmit လုပ်ပြီးမှ ပေါ်တယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
: ရယ် P ရယ် ပြီးတော့ : ရယ် D ရယ်လို့ ပြောတာလား ? ဒီလိုလေးးးးး
thank you meelay and nozomi .ကျွန်မလည်း မသိဘူး
oK သွားပါပြီ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မေ ကအခု မန်ဘာအသစ်ပါ ကောမန့်ပေးတဲ့စာပဲ ရိုက်တတ်သေးတာ။ ပိုစ့်တွေလည်း မတင်တတ်သေးဘူး။ ပြောပြပေးကြပါဦးနော်
;) ^_* ^_^ *_*
ငါလည်း ဒီပို့စ်မှာ လာစမ်းရမယ်
မတူတဲ့အတွေးနဲ့ချရေးပါဆိုတဲ့အတိုင်း အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်ဆိုရင် တူတာလဲ ရှီ
ဒါပေမယ့် လူဆိုတာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် မှန်စမြဲဆိုတော့………………………
ဟားဟား ခုမှ သေချာ ပြန်ဖတ်မိတယ်…။ ဆေးခန်းလာတဲ့ အဘိုးပြောလိုက်တဲ့စကား…..။ သမီးမှာ အဖော်ရှိရင်နှစ်ခုလောက်ပေးစမ်းပါဆိုတော့………ဟေးးးးးးးး တို့တောင်သွားတောင်းချင်လာပြီ
ဟုတ်သွားပြီ ဖြေတဲ့သူရော မေးတဲ့သူရော ကျေးဇူးပါ..ခုမှသိတာပါ….:P
နေဦးkiss ပေးလို့ရလား စမ်းကြည့်ဦးမယ် … :x :*
မမလေးက ဘယ်သူ့ကို kiss ပေးချင်နေလဲ မသိဘူးနော်…
ကျွန်တော်လည်း တစ်ခုလောက်ဝင်မေးချင်လို့။ profile picture ကို ဘယ်လို